JIGJIG: Maxaad Ka Taqaannaa Goobta Lagu Dhacdo Hantida Ummadda Ee Aanay Cidina Ka Hadli Karin? - Jigjiga Online
HomeSomalidaJIGJIG: Maxaad Ka Taqaannaa Goobta Lagu Dhacdo Hantida Ummadda Ee Aanay Cidina Ka Hadli Karin?
Jigjiga (JO) – Dhibaatada Jibriga ama Wakaalada Kastamada ay shacabka Degaanka Soomaalida ku hayso aad bay u balaadhan tahay lagumana soo koobi karo qormo iyo lababa, balse waxaan yara taaban in yar oo ku saabsan gaadiidka.
Berigii hore ee TPLF ay bilowga ahayd koontarabaankana ay iska dhuuqayeen sharciga waxaa uu maxkamadaha degaanada siinayay inay dhagaystaan dacwadaha kontorobaanka. Tusaale, hadii xoolo dibi ah la soo qabto dadku waxay ka dacwoon jireen maxkamada gobolkaa ku taala taas oo uga garnaqi jirtay in meesha lagu soo qabtay (aalaaba agagaarka xuduuda) ay kontorobaan la dhoofinayo yihiin ama ayna ahayn.
Xiliyadii danbe ee dhiig miiratadu dhiigaysteen ayay si murankuba u hadho waxay dawlada Federaalka ka soo ansixisteen in dhagaysiga alaabta ay soo qabsadaan looga saaro degaanka oo guddi ay iyagu leeyihiin loogu bayaamiyo. Sharcigaas ay samaysteen ayaa hadana u jideeyay in cidii cabasho ka qabta go’aanka guddiga ay rafcaan u tagi karaan uun maxkamada federaalka ee Addis Ababa.
Dhibaatada Dhanka Gaadiidka: Tuuga 1aad
Hadaan is ku dayno inaan sharaxno caqabadaha canshuurta gaadiidka way nagu badan balse waxaan ku soo koobaynaa in hadaad gaadhi soo iibsato ay dawlada Itoobiya kaa rabto canshuur kolkol gaadhaysa 350% (Waa qiyaas celcelis).
Hadaba dadkeenu arrintaa aad bay u dhibtaa kolkaad u fiirsato haynta iyo xaalada nololeed. Mana yaqaanaan wadooyinka qalqalooca ee Itoobiyada kale marto ee wax loo farsameeyo. Waxayna inta badan isku dayaan inay baabuur si sharci darro ah iskaga soo gashadaan oo taariko been ah ama bilaa taariko ah iskaga wataan. Laga yaabaa in intay Hargeyaa tagaan ay gaadhi xarago ah 4,000 US$ iskaga soo gashadaan mana cashuuran karo oo canshuurtu >300% waxay ku tagaysaa (4,000+13,000=17,000) oo maalmo wataan balse kama dambaysta daaquudkii Finance Police (Federal Police) ayaa kala wareegi oo.waa laga xarayn.
Xalaalaynta (Car Laundary): Tuuga 2aad.
Maamulka Jibriga hantida ay qabtaan waxaa sharcigu u saamaaxayaa inay xaraashaan oo ay lacag ka soo celiyaan dabadeedna cida iibsata loo xalaaleeyo oo sharci loogu sameeyo. Mulkiilihii lahaa ee laga qabtay ama qof kale oo Jigjiga ama Degaanka jooga looma ogola inuu xaraashto. Gaadiidka waa la rari waxaana loo qaadi Addis Ababa.
Dabadeed Addis Ababa asxaabtii iyo ehelkii Jibriga iyo kuwii u cadaynayay hantida ayaa daaha dabadiisa xaraash lagu buuxin waxaana gaadhigii Adeero Abebe Asmalaash.lagaga iibin 200,000 (wax ka yar 4 000 US$ ee la soo siiyay Hargeysa ama Dubai). Xaraashka hortii ayay Makaanik ay isla shaqeeyaan loo diri waxaana waraaqaha lagu qori inuu gaadhigu qorqoro yahay matoorkiisuna 10 goor soo duqeeyay ee meesha laga qaado. Eesh calaa sharci!!!
Labada nin mid sharcigii lio samaystay ayaa intuu cagaha qabtay u diiday gaadhi inuu si fudud u helo oo hadana dhacay midna isagoo aan soo dhididin ayuu sharciguu samaystay ku helay inuu gurigiisa gaadhi ka raqiisan suuqa Dubai uu ku helo.
Labadaa yaa TUUG ah?
20% baabuurta dhex oroda Addis Ababa waa fatooradihii Maryoolayda laga qaaday ama waxay dhaleen.
Tuugnimada waa lagu kala xariifsan yahay
Share dhaha, fikirkiinana halkan noogu reeba ama dhibaato tan la mid ah nagu darsada si aanu u ogaano
Warbixintan waxa lagu qoray: Geedka Nabada